August 2014 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
အကင် စားသုံးခြင်း နှောက် ကွယ် မှ ကင်ဆာ ရောဂါ
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ကုန်ကြမ်းများ၊ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ အေးခဲအသားများ၊ ရက်လွန်အသားများ အတိုင်းအဆမရှိ ဝင်လာခြင်းနှင့်အတူ လမ်းဘေးဆိုင်များ၌ သာမက ဆိုင်ကြီးများ၌ပါ ''အကင်'' ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးဝေဆာလာခဲ့သည်။ အမေရိကန် ကင်ဆာ သုတေသန အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ရာတွင် အသားကြော်များ၊ အသားကင်များ၊ ပလတ်စတစ်အိတ် ပတ်ထားသည့် အစာများ၊ ဆီကဲ့သို့သော အဆီအမျိုးမျိုး သုတ်လိမ်းပြီး မီး သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်မီး ဖြင့်ဖုတ်ခြင်း၊ ကင်ခြင်း၊ ပြုတ်၍ စားခြင်းတို့ကြောင့် လူတို့၏ဒီအင်အေကို ဖျက်ဆီးနိုင်သော ဓာတုဓာတ်များ ပါဝင်မှုများလာခြင်းကြောင့် ကင်ဆာအလွယ် တကူဖြစ်စေရန် အခွင့် အလမ်းများ ဖြစ် ပေါ်လာတော့သည်။
အမည်မသိ အသားများကို ဆီသုတ်၍ မီးကင်စားခြင်းကြောင့် ထိုအကင်တွင် အထူးသဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဆိုင်ကလင်းအာမီနို (HCA)နှင့် ပိုလီဝီတစ်ဟိုက် ဒရိုမက် တစ်ဟိုက် ဒရိုကာဗွန်ဓာတ် (PAH) များပါဝင်သောကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ များကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ HCA သည် မီးကင်ထားသည့် အစာတွင် မြင့်မားစွာ ပါဝင်သည်။ သား၊ ငါး၊ ပုစွန်၊ အမဲသားနှင့် အခြားအသားများကို မီးဖုတ်ခြင်း၊ ကြော်လှော်ခြင်း၊ မီးကင်ခြင်းပြုလုပ်သည့်အခါ အပူချိန် ၂ဝ၂ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြင့် ကင်ဖုတ်ရာမှ ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဓာတ်ပစ္စည်းများ ထွက်လာသည်။ အကင်များကို မီးသွေးအနည်းငယ်ဖြင့် မကျက်တကျက်ကင်၊ မီးဖုတ်ရောင်းချကြသည်။ အချို့အသားတုကို ပတ်ထားသည့် ပလတ်စတစ်များကိုပင် မခွာတော့ဘဲ ကင်ကြသည်။
ဈေးနှုန်းချိုသဖြင့် ဝယ်စားသူက ဝယ်စားကြသည်။ ထိုအစားအစာများကြောင့် အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်းများပြီး အသက် ဆုံးရှုံးကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်၊ မြောက်ဘက်နှင့် တောတောင်ထူထပ်သည့် အရပ်ဒေသ၊ ပင်လယ်ရေပြင်နှင့် နီးစပ်သည့် အရပ်များမှာ အသား၊ ငါး၊ ပုစွန်ကို မီးကင်စားတတ်သည်။ ထိုဒေသများမှာ အသည်းကင်ဆာ အဖြစ်များကြသည်။ အလွယ်တကူ စားသုံးတတ်သည့် အလေ့အထကြောင့် ကျန်းမာရေးသတိမရှိတတ်ကြပါ။
တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာပင် အကင်စားသူများ များလာသည်။ အကင်ကြောင့် ကင်ဆာရောဂါနှင့် အခြားရောဂါ (သံထခြင်း)၊ အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကင်ဆာရောဂါ၏ တရားခံလက်သည်မှာ အကင်၊ အကြော်အလှော်များစွာ စားသုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
မြန်မာတို့သည် အကြော်အလှော်၊ အကင်များ စားသုံးကြရာ လတ်ဆတ်သော ရိုးရိုးငါးသလောက်ကင်၊ ပုစွန်ကင်တို့သာ စားသုံးခဲ့၍ လေဖြတ်၊ သွေးတိုးနှင့် နှလုံး ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ် ခံစားရခြင်းမရှိပါ။ ထိုစဉ်က နာမည်ဆန်းနှင့် အကင်ပစ္စည်းများ မရှိသလို ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ ယိုးဒယား၊ ဂျပန်ကင်များလည်း ဝင်မလာခဲ့ သေးပါ။ ကင်ဆာဆဲလ်များ ပြန့်ပွားမှုသည် ကျပ်တင်ခြောက်များ ပြုလုပ်စားသောက်ခြင်း၊ ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ်၊ သိုးနှင့် ငါးမျိုးစုံတို့ကို သဘာဝနေအပူဖြင့် ခြောက်သွေ့အောင် မလှန်းဘဲ မီးပေး၍ကျပ်တိုက် (မီးပူခံ)စားခြင်းကြောင့် အနီရောင် အသားဖြစ်သော အမဲသား၊ ဝက်သား၊ ဆိတ်သားတို့မှ တစ်ဆင့် ဘေးဖြစ်စေသဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ တတ်သည်။
အကြော်အလှော်၊ အကင်များတွင် ငါးကင်၊ ပုစွန်ကင်မှလွဲ၍ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ လူ့ဘဝကို သက်တမ်းကုန် အထိ ဖြတ်သန်းနိုင်စေခြင်း အလို့ငှာ အကင် စားသုံး ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်သော ''အကင်နှင့်ကင်ဆာ'' အကြောင်း သတိပြုနိုင်စေရန် ရှာဖွေတင်ပြ လိုက်ရပါသည်။
Menopause (2) သွေးမဆုံးခင်နဲ့ သွေးဆုံးရင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၂)
သွေးမဆုံးခင်ဖြစ်တာတွေဟာ လူ့သဘာဝမှာ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရတဲ့ ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ် ဖြစ်တယ်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးကုဘို့ လူတိုင်းတော့ မလိုတတ်ပါ။ လိုသူတွေမှာ ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ပိုင်းမှာပါ လိုအပ်ကြတယ်။ တကယ်သွေးမဆုံးခင် ရာသီ ဖေါက်ပြန်တယ်။ လမမှန်၊ ရက်မမှန် ဖြစ်တာ များတယ်။ အမျိုးသမီးတယောက် ဘယ်တော့ သွေးဆုံးမလဲကို အကြမ်းပြောရရင် မိခင်နဲ့ အတော်တူတာများပါတယ်။
Menopause (1) သွေးမဆုံးခင်နဲ့ သွေးဆုံးရင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၁) ကိုလဲဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Menopause (1) သွေးမဆုံးခင်နဲ့ သွေးဆုံးရင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၁)
ဆရာရှင့် ကျမအသက် ၄၇ ပြည့်တော့မှာပါ။ ကျမမှာ သားသမီးသုံးယောက်ရှိပါတယ်ဆရာ။ ကျမအသက် ၃၆ နှစ်မှာ သားအိမ်တွင်းမှာ အဖုလေးတွေ့လို့ သားအိမ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ရာသီသွေးဆင်းတိုင်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနာကျင်ကိုက်ခဲနေတာမို့ OG ပြရင်း အဖုလေးတွေ့တယ်ဆိုလို့ပါ။ သားသမီးလဲသုံးယောက်ရှိပြီးသားမို့ သားအိမ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ကလွဲရင် မရှိလဲရတဲ့ အပိုပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ထုတ်ချင်လဲရတယ်ဆိုလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကျမ သားအိမ်ထုတ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်ဆရာ။ အဲဒီအချိန်က ကျမအသက်ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီး သားအိမ်ကိုသာထုတ်ခဲ့ပြီး မျိုးဥအိမ်နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကိုတော့ ချန်ထားခဲ့တယ်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တနှစ် အသက် ၃၇ နှစ်မှာ အရည်အိတ်ထပ်ဖြစ်လို့ အဲဒီဆရာမကြီးနဲ့ပဲ ပြန်ပြပြီး အကုန်ဖယ်ရှားလိုက်ရပါတယ်ဆရာ။ အစပိုင်းတုန်းက ကျမသဘောပေါက်တာက သားအိမ်ထုတ်ထားရင် သွေးဆုံးကိုင်တဲ့ ဝေဒနာမခံစားရဘူးလို့ပဲ သဘောပေါက်တာပါ။ OG ကလဲ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မဆွေးနွေးခဲ့ပါဘူးရှင်။ နောက်ပိုင်းကျမ စာတွေဖတ်ရင်းနဲ့ သိလာတာက သားအိမ်ထုတ်ထားတဲ့သူဟာ သာမာန်လူထက် ပိုပြီး သွေးဆုံးကိုင်တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားရတယ်ဆိုတာပါ ဟုတ်ပါသလားရှင်။ အခု ကျမအသက် ၄၇ မှာ အစားအသောက် စားချင်စိတ်မရှိတာ ညဘက်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်မပျော်တာ ဘယ်လောက်ပဲညည့်နက်မှအိပ်ပါစေ မနက်လေးနာရီဆို နိုးနေတာ နေ့လည်ဘက်လဲ တခါတရံ အိပ်ရေးပျက်လွန်းမှ ခဏလေးအိပ်ပျော်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နားတွေက လေထွက်သလိုအူလာပြီး တစုံတခုဆို စိတ်အားငယ်လာတယ် မျက်ရည်လွယ်လာတယ်ဆရာ။ ချွေးတအားထွက်ရင် လူကနုံးချိပင်ပန်းသလိုခံစားရပြီး အပူဒဏ်လဲမခံနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ရှုပ်တဲ့ဒဏ်တွေမခံနိုင်တော့ပဲ တယောက်ထဲ အေးအေးဆေးဆေးနေချင်စိတ်သာ ဖြစ်လာတယ် ပင်ပင်ပန်းပန်းလဲ ဘာတခုမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါ သွေးဆုံးကိုင်တဲ့ လက္ခဏာလို့ ပြောပါတယ်ရှင်၊ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ သားအိမ်ထုတ်ထားတဲ့သူတယောက်ဟာ သွေးဆုံးကိုင်ရင် ဘယ်လို သိနိုင်ပါသလဲရှင်။ သူများထက်ပိုခံစားရတယ်ဆိုတာရော ဟုတ်ပါသလား ဘယ်လိုပိုခံစားရသလဲ သားအိမ်ထုတ်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ ကျမသိချင်တာပါရှင်။
Menopause (2) သွေးမဆုံးခင်နဲ့ သွေးဆုံးရင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၂) ကိုလဲဖတ်နိုင်ပါတယ်။
မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်၏ Wrecking Ball ဂီတ ဗီဒီယို ယခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး ဂီတ ဗီဒီယိုဆု ရရှိ
သြဂုတ် ၂၄ ရက်က ကျင်းပခဲ့သော MTV ဂီတ ဆုပေးပွဲ၌ အဆိုတော် မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်၏ Wrecking Ball ဂီတ ဗီဒီယိုသည် ယခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးဂီတ ဗီဒီယိုဆုကို ဆွတ်ခူး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိုင်လီ၏ Wrecking Ball ဂီတ ဗီဒီယိုသည် ဘီယွန်းစေးနှင့် ဂျေဇီးတို့ သီဆိုထားသော Drunk in Love ဂီတဗီဒီယို၊ ဖာရယ်လ်ဝီလျံ၏ Happy ဂီတဗီဒီယို၊ ဆိုင်အာ သီဆိုထားသည့် Chandelier ဂီတဗီဒီယိုနှင့် အစ်ဂီအဇာလီအာနှင့် Charli XCX တို့ သီဆိုထားသော Fancy ဂီတဗီဒီယို တို့ကို ကျော်ဖြတ်၍ ယခုနှစ်၏ ဂီတဗီဒီယိုဆုကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် မိုင်လီသည် အဆိုပါ ဆုကို သူမကိုယ်တိုင် တက်ရောက်မယူဘဲ သူမ ကိုယ်စား အိမ်ရာမဲ့ လူငယ်တစ်ဦးအား ဆုတက်ရောက်ယူ စေခဲ့သဖြင့် သူမ၏ လုပ်ရပ်ကို ပရိသတ် များက အံ့အားသင့် ခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ အိမ်ရာမဲ့ လူငယ်လေးသည် My Friend's Place အိမ်ရာမဲ့များ စောင့်ရှောက်ရေး စင်တာမှ ဖြစ်ပြီး ၄င်းက MTV ဂီတဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ၄င်းတို့၏ စင်တာအတွက် ငွေကြေးများ ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ၄င်းစင်တာနှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မိုင်လီ၏ ဖေ့ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြ ထားသည်ဟု သိရသည်။
Date rape ကို ချိန်းတွေ့ကျင့်ကြံခြင်းလို့ အသုံးများပေမဲ့၊ ပညာရှင်အများစုကတော့ ဆေးဝါးအသုံးပြု၍လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခြင်း၊ Drug-facilitated sexual assault အသုံးအနှုန်းကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ဆေးဝါးတွေကို ဓါးပြမှုနဲ့ ရုပ်ပိုင်းအရ တိုက်ခိုက်ခြင်းလို တခြား ရာဇဝတ်မှုများမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျားမ မရွေး ဆေးအာနိသင်ပြနိုင်စေတယ်။
ဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကြောင့် ဆေးခတ်ခံရသူဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခုခံနိုင်မှု မရှိတော့ဘဲ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးပြီး၊ ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတောင်မှ မှတ်မိနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်တယ်ဆိုရာမှာ ကာယကံရှင်ရဲ့ သဘောဆန္ဒမပါဘဲ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူတိုင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ အရောင်မရှိ၊ အနံ့မရှိဘဲ အရသာလည်း မရှိကြလို့ တစ်ဖက်သား မရိပ်မိစေဘဲ အချိုရည်ထဲ ထည့်နိုင်တယ်။
Date rape drug အမျိုးအစားအနည်းဆုံး သုံးမျိုး ရှိတယ်။
၁။ GHB (Gamma Hydroxybutyric Acid) = အရောင်အဆင်းနှင့် အနံ့မရှိသော အရည်၊ အဖြူရောင်အမှုန့်နှင့်ဆေးပြား၊ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိသည်။
၃။ Ketamine (Ketamine Hydrochloride) = အဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်သည်။
လျှင်မြန်စွာ အာနိသင်ပြနိုင်တယ်။ ဆေးအာနိသင် မပျယ်ခင်ခံတဲ့အချိန်ကတော့ ကွဲပြားတယ်။ ဆေးဘယ်လောက် အသုံးတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ အရက်လို တခြားရောစပ်တာတွေအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အရက်ကနေ အဲဒီဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကို ပိုဆိုးဝါးစေပြီး၊ ကျန်းမာရေးကို ပိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။
အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု လျှော့ကျခြင်း၊ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ အမြင်ဝေဝါးလာခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ လေဖြတ်သကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်း၊ ဆေးခတ်ခံရချိန်နှင့် ဆေးအာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက်များအား မမှတ်မိခြင်း၊ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း၊ တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးကွေးခြင်း၊ အိပ်မက်ကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း၊ သတိမေ့မြောခြင်း၊ ဦးနှောက်အလုပ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း။
အလတ်စား Benzodiazepine ဆေးဖြစ်တယ်။ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါအတွက် ရေတိုဆေး အနေနဲ့ သုံးသလို မေ့ဆေးမပေးခင် ကြိုတင်ပေးတဲ့ဆေးအဖြစ်လည့်းသုံးတယ်။ စိတ်ငြိမ်စေမယ်၊ ကြွက်သားတွေကို ပျော့စေမယ်၊ စိုးရိမ်စိတ်နည်းစေမယ်၊ တက်မှာကို တားပေးမယ်။ တခြား Benzodiazepines နဲ့တူတဲ့ဆေးတွေကတော့ Valium (Diazepam), Librium နဲ့ Xanax တွေ ဖြစ်တယ်။ Valium ထက် ၇-၁ဝ ဆ စွမ်းတယ်။ ဆေးပေးပြီးနောက် ၁၅-၂ဝ မိနစ်မှာ အစွမ်းပြပြီး၊ ၄-၆ နာရီအထိခံတယ်။ တကယ်တန်း အစွမ်းကုန်တာကတော့ ၁၂ နာရီကြာမှဖြစ်တယ်။
ဆေးခတ်ခံရချိန်နှင့် ဆေးအာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက်များအား မမှတ်မိခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်း၊ အိပ်ချင်လာခြင်း၊ ကြွက်သားများ အားလျှော့လာခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကြွက်သားများအား ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း၊ အရက်မူးသလိုဖြစ်ခြင်း၊ မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ စကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း၊ လှုပ်ရှားရန် ခက်ခဲလာခြင်း၊ အသိစိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ဇဝေဇဝါဖြစ်ခြင်း၊ အမြင်ဝေဝါးလာခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ အစာအိမ်မအီမသာဖြစ်ခြင်း။
စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း၊ အချိန်နှင့် အမှတ်အသားများအား မှတ်သားနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အမြင်နဲ့ အကြားအာရုံ မမှန်မကန် ဖြစ်လာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ မထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ ခံစားလာရခြင်း၊ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းအားထိခိုက်ခြင်း၊ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲလာခြင်း၊ အူတက်အောင်ရယ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ထိတွေ့ခံစားနိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်ခြင်း၊ အိပ်မက်ကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း၊ ထုံထိုင်းခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုအား ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အမူအရာ ကြမ်းတမ်းလာခြင်း၊ စကားသံ ဗလုံးဗထွေးဖြစ်ခြင်း။
တစ်ချို့ဆေးတွေက တရားဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မထိခိုက်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဆရာဝန်လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ အသုံးမပြုသင့်ပါ။ Rohypnol က တရားဝင်ဆေးဝါး မဟုတ်ပါ။ ဥရောပနှင့်မက္ကစီကိုတို့မှာ အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါအတွက် ညွှန်လေ့ရှိပြီး တရားဝင် အသုံးပြုတယ်။ Ketamine ကို အမေရိကမှာ လူနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေ မေ့ဆေးအဖြစ် တရားဝင် သုံးစွဲတယ်။ တိရိစ္ဆာန်ဆေးခန်းများရှိ Ketamine ဆေးများအား မကြာခဏ လုယက်ခံကြရသတဲ့။ GHB ကို Narcolepsy ခေါ်တဲ့ အိပ်မပျော်သည့်ရောဂါကို ကုသဘို့ အမေရိကမှာ မကြာသေးမီက တရားဝင်ဆေးဝါးအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ်။
သံပရာရည်သောက်သုံးခြင်းသည် ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းအား ကာကွယ် ပေးသည့်နည်းလမ်းငါးခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သံပရာရည် အများအပြား သောက်သုံးပေးခြင်း အားဖြင့် အစားအစာတွင်ပါဝင်သော ကယ်လ်စီယမ်၊ ပရိုတိန်းနှင့် ဆားဓာတ်ပမာဏများကို လျှော့ချပေးသွားနိုင်ကြောင်း ယူစီဆန်ဒီယာဂိုကျောက်တည် ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာရိုဂါအယ်လ်ဆာက ပြောကြားလိုက်သည်။
သံပရာရည်တွင် ဆီထရစ်အက်စစ် (အချဉ်ဓာတ်အက်စစ်) ပါဝင်မှုပမာဏမြင့်မားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုသံပုရာရည် လေးအောင်စကို ရေနှစ်လီတာဖြင့်ရော၍ နေ့စဉ်သောက်သုံး ပေးခြင်းအားဖြင့် လူနာတစ်ဦးချင်းစီတွင် ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်မှု ဖွဲ့စည်းချင်းနှုန်းကို ၁ ဒဿမ ၀၀ မှ ၀ ဒဿမ ၁၃ အထိ လျော့ကျသွားစေနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အခြား သစ်သီးဖျော်ရည်များတွင် ဆီထရစ်အက်စစ်ပါဝင်မှု ပမာဏနည်းပါးပြီး များသောအားဖြင့် ထိုအရည်များတွင် ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်မှုဖြစ်စေသည့် အဓိက အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ဖြစ်သော အောက်ဆဲလ်လိတ်နှင့် ထုံးဓာတ်များအ ပိုပါဝင်နေကြောင်း သိရသည်။
‘ဆာ’၏ အဆိုအရ အချို့သောသူများသည် မိမိတို့၏ ကျောက်ကပ်တဲတွင် သေးငယ်သော ထုံးကျောက် အတုံးကလေးများ ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပင် သိရှိခြင်း မရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည်ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ ပြင်းထန်သော နာကျင်မှု ဖြစ်ပေါ်လာသည်အထိပင် သိရှိခြင်းမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောက်ကပ်ထဲတွင် ကျောက်တည်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အရိပ်လက္ခဏာသုံးရပ်မှာ ကျောနှင့် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်း၊ ဆီးထဲသွေးပါခြင်းနှင့် ပျို့အန်ချင်စိတ်ဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘာလင် သြဂုတ် ၂၃
ဂျာမနီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ဆပ်ကပ်ပြပွဲတစ်ခု၌ ခြင်္သေ့မကြီးတစ်ကောင်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလွန်ရှားပါးသော ခြင်္သေ့ဖြူ လေးကောင်ပေါက်ဖွားခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းတို့တွင် အထီးသုံးကောင်နှင့် အမတစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
အဆိုပါ ခြင်္သေ့ဖြူလေးများသည် ယခုအခါ မက်ဒီဘက်မြို့သို့ရောက်ရှိလာပြီး အများပြည်သူများအား လှည့်လည်ပြသလျက်ရှိကြောင်း၊ ¤င်းတို့သည် မြူးနစ် အခြေစိုက်ခရုန်းဆပ်ကပ်ရုံ၌ ကျန်းမာစွာဆော့ကစား လျက်ရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်။
တောင်အာဖရိကတောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သူများက အဆိုပါခြင်္သေ့ဖြူများကို ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်တော့မည့် တိရစ္ဆာန် များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါ ရှားပါးခြင်္သေ့ များသည် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများ တင်ဘာဗတီဒေသ ၌သာလျှင်ရှိတော့ကြောင်း၊ သဘာဝအလျောက် တွေ့ရမှု အလွန်နည်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၄င်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းသူများက ပြောသည်။
ရှားပါးခြင်္သေ့ဖြူအရေအတွက်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း တိရစ္ဆာန်ရုံများနှင့် ဆပ်ကပ်ပြပွဲရုံများ၌ ရာဂဏန်း ခန့်သာရှိတော့သည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ ရှားပါးခြင်္သေ့များ ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညက ပေါက်ဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
¤င်းတုိ့ကို ခုနစ်နှစ်အရွယ် မင်းသမီးဟု အမည် ပေးထားသော ခြင်္သေ့မကြီးနှင့် ဘုရင်တွန်ဂါဟု အမည်ပေး ထားသော ခြင်္သေ့ကြီးတို့မှပေါက်ဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ¤င်းတို့သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က ခြောက်ကောင်ပေါက်ဖွားခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။
ဆရာရှင့် ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားပြီး ခင်ပွန်းနဲ့ ဘယ်အချိန် အတူပြန်နေလို့ရနိုင်လဲ သိချင်ပါတယ်။ နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ် ဘယ်လို တားဆေးမျိုး သုံးသင့်လဲဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဆရာ့ blog ထဲကိုဝင်တာ never end ဆိုပြီး ဘာစာမှ ဆက်ဖတ်လို့ မရလို့ပါရှင့်။
ပဌမမေးခွန်းအတွက် တိုက်ရိုက်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ကလေးမွေပြီးတဲ့နောက် အမျိုးသမီးများဟာ ခင်ပွန်းနဲ့ အတူပြန်နေတာမှာ မြန်ကြတာ များတယ်။ ၄ ပတ်ဆိုရင် ၃ ပုံ ၁ ပုံနဲ့ ၈ ပတ်ဆိုရင် ၈၈% လို့ ပြောနိုင်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာ ၁၆ ပတ် (၄ လ) ရှိရင် မိခင်လောင်းရဲ့ နို့တွေကနေ နို့ရည်ထွက်နိုင်ခြေ ရှိလာပြီ။ အရွယ်အစား ကြီးထွားလာလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အချင်းကနေ ထုတ်ပေးနေတဲ့ (အီစထိုဂျင်) နဲ့ (ပရိုဂျက်စတင်) ဟော်မုန်းတွေကြောင့် နို့ထွက်အောင်လုပ်ပေးမဲ့ ဦးနောက်မှာရှိတဲ့ (ပစ်ကျူထရီ) ကနေ နို့ထွက်ဟော်မုန်း နို့ထွက်ဟော်မုန်းကို ထွက်မလာအောင် တားထားသေးတယ်။
ကလေးဖွါးပြီး အချင်းကျတာနဲ့ (အီစထိုဂျင်) နဲ့ (ပရိုဂျက်စတင်) တွေ နည်းလာပြီး နို့ထွက်ဟော်မုန်း (ပရိုလက်တင်) ထွက်လာပြီးသကာလ နို့တွေကနေ နို့ရည်တွေ ထွက်တော့မယ်။ တခုရှိပြန်တာက ကလေးကို နို့မတိုက်ရင်တော့ အဲလို မဖြစ်တော့ ပြန်ဘူး။ ကလေးက နို့ကို စို့ (စုပ်) တာကနေ နိုးဆွပေးတဲ့သဘော သက်ရောက်တယ်။
- Progestin-only implants အရေပြားအောက်မှာ ထည့်ထားရတဲ့ အချောင်းမျိုးသုံးနိုင်တယ်။ ဥပမာ Norplant ဖြစ်တယ်။
- Contraceptive implant အရေပြားအောက်မှာ ထည့်ထားရတဲ့ ဟော်မုန်းပါ ဆေးချောင်းထည့်နည်း Norplant and Jadelle (Norplant II), Implanon, Sino-implant (II) marketed as (Zarin, Femplant and Trust), Nexplanon တွေကို သုံးနိုင်တယ်။
- Intrauterine devices (IUD) သားအိမ်ထဲ (ကောပါး-တီ) ထည့်နည်းမှာ ဘာဟော်မုးန်မှ မပါလို့ နို့ထွက်တာကို သက်ရောက်မှု မရှိပါ။
ကလေးတလခွဲရှိတဲ့အထိ တားဆေးမသုံးဘဲလဲနေနိုင်တယ်။ ကလေး နို့ဖြတ်ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့နည်းကို ပြောင်းသုံးနိုင်တယ်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲကို ကလေး ၆ လရပြီးမှာ သုံးရင် နို့ထွက်နည်းတာကို ရှောင်နိုင်မယ်။ ကလေးကို နို့တိုက်ပေးနေရင် နောက်ကလေး ရဘို့ ဝေးတတ်တယ်။ ဒါမျိုးကို ဆေးစာမှာ Lactational amenorrhea ခေါ်တယ်။ ရာသီမဆင်း၊ ကလေးမရတာမျိုး ဖြစ်တယ်။
မြန်မာ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို ထည့်သွင်း ပြသဖို့ လိုနေပါ သေးတယ် ဆိုတဲ့ မိုးယုစံ
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာမှ ရုပ်ရှင်ကားများ၊ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းများ များစွာဝင်ရောက် လာမှုရှိရာ ၎င်းတို့၏ ဇာတ်ကားတိုင်းတွင် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ပြသော သရုပ်ဆောင်မှု များစွာ
ရှိနေသေးသဖြင့် မြန်မာဇာတ်လမ်းများတွင်လည်း နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာတွေကို ထည့်သွင်း ပြသဖို့ လိုနေပါသေးတယ် ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်မိုးယုစံနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့ ပုံကို ယခုလိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
လတ်တလော အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု လေးတွေ ရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
မိုးယု လတ်တလောကတော့ ကားရိုက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ကိုဇေရဲထက်နဲ့ ရိုက်ထားတယ်။ အဲဒီကား အပြီးမှာ ကိုထိုက်စံမော့စ်နဲ့ ''နောင်ဝေဝေ'' ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ရိုက်ဖို့ စီစဉ် နေ ပါတယ်။ ဒီကားထဲက ကာရိုက်တာ လေးကတော့ လူငယ်ဆန်ဆန် ကာရိုက်တာ လေးတွေ ပါပဲ။ ချစ်သူနဲ့ ဖခင်ကို အဆင်ပြေအောင် ကြားထဲက ညှိပေးရတဲ့ကောင်မလေး နေရာက ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ရတာပါ။
ဆရာ ပန်းချီစိုးမိုးနဲ့လည်း ရုပ်ရှင်ကားကြီး ရိုက်နေတယ်နော်။ ဇာတ်ကားကြီးက ပြီးသွား ပြီလား။ အခြေအနေကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
''ကျွန်တော့် ရည်းစား ဘုရားမှာ နေသည်'' ဆိုတဲ့ ကားကြီးပါ။ ဆရာ ပန်းချီစိုးမိုး၊ ကိုစိုး ရန်အောင်တို့နဲ့ ရိုက်နေတာ တစ်နေ့ကပဲ မိုးယုပါဝင်တဲ့ အခန်းတွေကို အပြီးသတ်ရိုက် ဖြစ်တာပါ။ ဆရာ ပန်းချီစိုးမိုး ရိုက်ခဲ့တဲ့ ကားလေးကလည်း ညီမအတွက် အရင်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ ကားကြီးတွေ ထဲမှာ ထူးခြားတယ်လို့ပြော လို့ရပါတယ်။ ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကာရိုက်တာတွေက လည်း ဟာသတွေက များတယ် ဆိုတော့လေ။ ဒီကားထဲမှာ ကလည်း ဇာတ်ရုပ်က သုံးမျိုး လောက် ပြောင်းပြီး ရိုက်ထား ရတယ်။ ညီမ အတွက် အတွေ့အကြုံ အသစ်တွေ အများကြီး ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားပါ။
အခုဆိုရင် မိုးယုရိုက်ခဲ့တဲ့ ကားတွေနဲ့မတူဘဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ ကာရိုက်တာ ပုံစံမျိုးလေး ရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ကာရိုက်တာ ထဲမှာတော့ မိုးယုမလုပ်ဘူးတဲ့ ကာရိုက်တာတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ ကိုယ်မလုပ်ဘူးတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးတွေ ရှိနေသေးရင် ကိုယ့်ကို လာအပ်ရင် လုပ်ကြည့် သွားမှာပါ။ ထူးထူးခြားခြား အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ ကာရိုက်တာလေး ဆိုရင်တော့ ခပ်မာမာနဲ့ ဗီလိန် ပုံစံမျိုးလေးတော့ သရုပ်ဆောင်ချင်တယ်။
မိုးယုအနေနဲ့ ကိုယ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ် ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့ အခါမှာရော အားရမှုရှိလား။
မိုးယုက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးတတ်တဲ့ အထဲမှာလည်း မပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင် ကြီးပြီး ဘဝင်မြင့်တဲ့ သူတွေကိုလည်း အရမ်းမုန်းတယ်။ အဲဒီအတွက် မိုးယုရဲ့ ဇာတ်ကားတွေ မှာ မိုးယု လိုအပ်နေတာတွေ ကိုတွေ့တဲ့အခါ ပြင်တယ်။ မိုးယုလည်း လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေမှာလေ။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်သိတာရော၊ မသိတာတွေရော အားလုံး ကို ပြင်ဆင် လေ့ကျင့် သွားမှာပါ။
မိုးယုရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လက်စွဲထားတဲ့ စကားလေး ရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
အဓိကကတော့ ကိုယ်ရတဲ့ ဘယ်အလုပ် မဆို တာဝန်ကျေဖို့ လိုပါတယ်။ တာဝန်ကျေ ဖို့ရယ်၊ စေတနာ ထားမှုရယ် အဲဒါတွေကို မိုးယုလုပ်တဲ့ အလုပ်တိုင်းမှာ ထည့်ပြီး ရသမျှ အလုပ် တွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်သွားတာ ပါပဲ။
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်စား နေတဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အနုပညာတွေက ဘာတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ မြင်မိလဲ။
သူတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ မိုးယု သတိထား မိတာကတော့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို အရမ်း ဖော်ပြကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခေတ်ဆန်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်း မှာလိုလို သူတို့ နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာ အစားအစာ၊ အဝတ်အစား၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းတွေကို ထည့်သွင်း ရိုက်ကူး ပြသ ကြတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးယုတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့ လေးတွေကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ပေးစေချင်ပါတယ်။
ပရိသတ်အတွက် စကားလက်ဆောင် လေး ပြောပေးပါဦး။
အားပေး နေကြတဲ့ မိုးယုရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ မိုးယုရဲ့လှုပ် ရှားမှု တိုင်းကိုလည်း ဆက်လက် အားပေး အကြံပေး ကြပါလို့ ပြောချင် ပါတယ်။
ပရိသတ် တောင်းဆိုမှုကြောင့် လက်ဝှေ့ ပြန်ထိုးဖို့ စဉ်းစားနေပြီလို့ ပြောလာတဲ့ တွေ့မရှောင်
မြန်မာနိုင်ငံ ချန်ပီယံ လက်ဝှေ့ စိန်ခေါ်ပွဲကြီးတွင် လက်ဝှေ့ဟန်ရေး လာရောက်ပြသ ခဲ့သည့် တွေ့မရှောင် သည် ပွဲကြည့်သူ လက်ဝှေ့ပရိသတ်များ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် မကြာမီ အချိန် တွင် လက်ဝှေ့ ပြန်ထိုး ရန် စဉ်းစားနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့ ပရိသတ်ကို ကြိုးဝိုင်းပေါ်မှ နေ၍ ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
''ဒီဘက်ခေတ် Fighter လက်ဝှေ့သမား လေးတွေကို အားမရလို့ ဝါရင့်သမ္ဘာရင့် Fighter လက်ဝှေ့ သမားကြီး တစ်ယောက် အနေနဲ့ လက်ဝှေ့ ပြန်ထိုးဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ်။ ပရိသတ်က တောင်း ဆို တာကြောင့်လည်း ကျွန်တော် လက်ဝှေ့ လောကထဲကို ပြန်ဝင်ဖို့ စဉ်းစားနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်ဝှေ့ လောကထဲကို ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာ ပရိသတ်တွေက ကျွန်တော့်ကို အားပေးကြပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်'' ဟု တွေ့မရှောင်က မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့ ပရိသတ် များကို ပြောကြား ခဲ့သည်။
တွေ့မရှောင်သည် လက်ရှိ အချိန်တွင် ထားဝယ်မြို့၌ အခြေချ နေထိုင် နေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ပွဲတွင် လက်ဝှေ့ဟန်ရေး တက်ပြခဲ့သည့် တွေ့မရှောင်ကို ယင်းပွဲ စီစဉ်သူ ဖြစ်သည့် T&T Group မှ ဦးစိုးသန်းဝင်းက ဆုကြေးငွေကျပ် ငါးသိန်း ချီးမြှင့် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တွေ့မရှောင်သည် မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့ သမိုင်း တစ်လျှောက်တွင် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကြာ အောင်မြင် မှုကို ထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့သည့် ဝါရင့် လက်ဝှေ့သမား တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျမ အမျိုးသား ရုတ်တရက်မခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး ဗိုက်အောင့်ပါတယ်။ ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်အနေနဲ့ သွားကြပါတယ်။ ဆရာဝန်က စမ်းသပ် ပြီး သွေး နဲ့ ဆီး ကိုစစ်ပါတယ်။ အဖြေ စောင့်နေတုန်းမှာ ဆီး နောက်တခေါက် သွားတော့ ဆီးမှာ သွေးပါ တယ်ရှင့်။ ဆရာဝန်က ဓါတ်မှန်ရိုက်ပေးပါတယ်။ သွေးပါ တဲ့အကြောင်းပြောတော့ ကျောက်ကပ် မှာကျောက်တည် တာလို့ပြောပြီး အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးရယ် ကျောက်ကပ်သန့် ဆေးရယ်ထိုးပေးပါတယ်။ ကျောက်ကပ်အထူးကုနဲ့ သုံးရက်ပြည့်လို့ ထပ်တွေ့ချိန် အဖြေကိုကြည့်ပြီး စိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်းပြောပါတယ်။ ကျမတို့က ထိုင်းမှာနေပါတယ်ဆရာ။ ဆေးစစ်ချက်အဖြေ မှာ ဆီးပိုးတွေ့ရှိကြောင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပိုးရှိကြောင်း မှတ်ချက်ရေးထားပါတယ်။ ကျမသိချင်တာက အဲ့လိုပိုးရှိနေရင် ဆီးမှာ သွေးပါတတ်သလားရှင့်။ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်တာ ဆီးပိုးနဲ့ဆိုင်နေမလား ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပိုး ရှိရင် ဘယ်လို ခံစားရတတ်လည်းပြောပြစေချင်ပါတယ်ရှင်။
• ဆီးသွားတိုင်း ပူပြီး နာမယ်။
• ဆီးခဏခဏသွားချင်စိတ် ဖြစ်နေမယ်။
• ဆီးစပ် ဗိုက်အောက်ပိုင်းနေရာက နာမယ်။
• ဆီးထဲ အနယ်ပါမယ်။ ဆီးနံ့ဆိုးတယ်။
• ဆီးထဲ သွေးလဲပါတတ်တယ်။
• တချို့မှာ အဲလိုဟာတွေ မခံစားရဘူး။
• ကျောက်ကပ်တည်ရာ နောက်ကျော ဘယ်-ညာ ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာနာမယ်။
• ကိုယ်ပူမယ်။ ချမ်းမယ်။
• ဆီးစစ်မှ ပိုး (ပြည်-ဆဲလ်) တွေ့ပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေ မခံစားရတာလဲ ရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်တော့ ဆေးကုမှ ကောင်းတယ်။ ကလေးတွေကိုလဲ ဆေးကုရမယ်။
• ခုခံအား မကောင်းသူ။
• (STD) လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ ဥပမာ -
၁။ Chlamydia (ကလာမိုင်ဒီယား)၊
၂။ Gonorrhea (ဂနိုရီးယား)၊
၃။ Trichomoniasis (ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်)၊
• ဆီးအိမ်ကနေ ကျောက်ကပ်ဆီရောက်နိုင်တယ်။ တဖက်ထဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်ဖြစ် ပိုးဝင်တာခံရမယ်။
• ကျောက်ကပ်ကို အလုပ်ဆက်မလုပ်နိုင်စေတာအထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• အစကတည်းက ကျောက်ကပ် သိပ်မကောင်းသူဆိုရင် ပိုဆိုးစေမယ်။
• ရှားရှားပါးပါး ပိုးက သွေးထဲရောက်ရင် တခြားနေရာတွေအထိ ပိုးရောက်ကုန်မယ်။
• အူတွေထဲမှာနဲ့ မျိုးပွါးလမ်းကြောင်းထဲမှာ (ဗက်တီးရီးယား) တွေရှိနေကြတယ်။
• တကယ်တော့ ဆီးဆိုတာ မကောင်းပေမဲ့ ကျန်းမာနေရင် ပိုးတွေရှိမနေပါ။
• E. coli ပိုးကနေဖြစ်တာများတယ်။ အမှတ်မထင် ရောက်လာတယ်လို့ ပြောရမယ်။
• ဆီးလမ်းအဝကနေ အထက်တက်မယ်။ အမျိုးသမီးတွေက ဆီးသွားလမ်းတိုကြလို့ ပိုအဖြစ်များကြတယ်။
• လိင်ဆက်ဆံမှု ဖြစ်နိုင်-ဖြစ်နေသူ အမျိုးသမီးများ၊
• ရေစိမ်ပြီး ခဏခဏချိုးသူများ၊
• ဆီးသွားချင်ပေမဲ့ မသွားသေးဘဲ အောင့်ထားသူများ၊
• ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်ရှိနေသူများ။
• Urinalysis ဆီးစစ်ခြင်း၊ (ဗက်တီးရီးယား) တွေ ပါနေ-မနေ စစ်မယ်။
• ဆီးထဲမှာ သွေးဖြူဥနဲ့ သွေးနီဥတွေကိုလဲ ရေတွက်မယ်။
• Dipstick test နည်းနဲ့စစ်တာမြန်တယ်။
• (ဗက်တီးရီးယား) အမျိုးအစားလဲ ခွဲဘို့လိုရင်လုပ်တယ်။
• ခုခံအားလဲ နည်းနေတာရယ် သကြားဓါတ်ကြောင့် ပိုးတွေပိုပြီး ပွါးလွယ်တာရယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ဆီးအိမ်သွား အာရုံကြောလဲ သိပ်မကောင်းနေတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အဖြစ်နည်းတယ်။ ဖြစ်ရင် တခြားအခံ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတခုခု ရှိနေနိုင်တယ်။ ဥပမာ ကျောက်ကပ်-ကျောက်၊ ဆီးအကျိတ် ကြီးနေခြင်း၊ STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ။
Honeymoon Cystitis မင်္ဂလာဦး ဆီးအောင့်ခြင်း
• ဆက်ဆံမှုကြောင့် (ဗက်တီးရီးယား) တွေကို နေရာပြောင်းပို့ပေးသလိုဖြစ်စေတယ်။
• တကယ်တော့ မင်္ဂလာဦးမှာသာ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါ။ အိမ်ထောင်မပြုသေးဘဲ ဆက်ဆံမှု စပြုသူတွေလဲ ဖြစ်သလို ကလေးအမေ ဖြစ်ပြီးမှလဲ ဖြစ်တယ်။
• ကိုယ်ဝန်တားဘို့သုံးရတဲ့ Diaphragm သားအိမ်ဝအဖုံး သုံးသူတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ ပျောက်တယ်။
• ဆီးသွားချင်ရင် အောင့်မထားပါနဲ့။
• ကျောက်ကပ် ပိုးဝင်တာကို ဆိုးမှသာ ပဋိဇီဝထိုးဆေးလိုမယ်။
• ပြန်ပြန်ဖြစ်နေရင် -
၁။ ပဋိဇီဝဆေးနည်းနည်းကို ကြာရှည်သောက်ပါ။
၂။ လိင်ဆက်ဆံပြီးတိုင်း ပဋိဇီဝဆေးတကြိမ်သောက်ပါ။
၃။ ဆီးအောင့်တယ်ထင်တာနဲ့ ချက်ချင်း ပဋိဇီဝဆေး သောက်လိုက်ပါ။
• ကျောက်ကပ်အထိပိုးဝင်တာ ဖြစ်လွယ်တယ်။
• ဟော်မုန်းတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ကြီးလာတဲ့သားအိမ်က ဆီးလမ်းကို ဖိနေလို့ ဆီးကို အောင့်ထား၊ အောင်းထားသလိုဖြစ်နေစေတယ်။
• သွေးဆုံးချိန်မှာ (အီစထိုဂျင်) ဟော်မုန်း နည်းလာတယ်။ ဆီးအိမ် နဲ့ (ဗဂျိုင်းနား) ကို ပိုးဝင်လွယ်စေမယ်။
• အသက်ကြီးသူတွေ ပိုဖြစ်ကြတယ်။ ခံစားရတာ ဖြစ်နေကြနဲ့ မတူတတ်ဘူး။ ကရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်တာ၊ စိတ်ကရောက်ကယက် ဖြစ်တာ ဆိုရင် ဆီးကိုစစ်ဘို့မမေ့ရပါ။
• ရောဂါတခုခုနဲ့ ဆေးရုံတက်နေရရင် ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆီးပိုက်တပ်ထားရရင် သေခြာပေါက် ဖြစ်နိုင်တယ်။
• မပြောတတ်လို့ ဒါတွေဖြစ်နေရင် သတိပြုပါ -
• ဘာလို့မှန်မသိဘဲ ကိုယ်ပူမယ်၊
• အစားပျက်မယ်၊ အန်မယ်၊
• အမူအယာ တမျိုးဖြစ်မယ်။
• အသက် ၁၁ နှစ်သမီးတွေ ၃% ၁၁ နှစ်သားတွေ ၁% မှာ ဆီးလမ်း ပိုးဝင်တယ်။
• အိမ်သာထဲမှာ ကြာနေရင် သတိထားကြည့်ပါ။
• တချို့ကလေးတွေမျာ မွေးရာပါ ဆီးလမ်းအားနည်းချက် ရှိနေနိုင်တယ်။
• ရေအိမ်သွားနည်း သင်ထားပေးပါ။
• လိင်ကိစ္စ မတိုင်ခင်နဲ့ ပြီးတိုင်းမှာ ဆီးသွားပါ၊
• သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာမှာ လက်ကို ရှေ့ကနေ နောက်ဘက်ဆီသာ တလမ်းသွားလုပ်ပါ၊
• မိန်းမကိုယ်သန့်ရှင်းရေး ဆေးရည်တွေ မသုံးပါနဲ့။
• ရေချိုးရင် ကြွေကန်ထဲ စိမ်မချိုးဘဲ အထက်ကနေ မိုးရွာသလို ကျနေတဲ့ ရေချိုးနည်း လုပ်ပါ။
Cranberry (ခရင်ဘယ်ရီ) သီး ဆီးအောင့်သူများအတွက် အလွန်ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ကာကွယ်ရာမှာသာ ကောင်းတယ် ဖြစ်နေတာကိုတော့ ပျောက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ အရွယ်လတ် အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပိုသင့်တယ်။ ဆေးလုံး-ဆေးတောင့်လုပ် ရောင်းတာလဲ ရှိတယ်။
ဦးနှောက် အတွင်းသို့ ဓားတစ်လက် စိုက်ဝင် ခဲ့သော်လည်း အသက် ရှင်ခဲ့သည့် တရုတ် အမျိုးသား
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်ပြည်နယ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး၏ ဦးနှောက်အတွင်းသို့ ၁၂ ထပ်ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခု၏ လသာဆောင်မှ ပြုတ်ကျလာသော ဓားတစ်လက် စိုက်ဝင်ခဲ့သော် လည်း ၎င်းအား အသက်ရှင်လျက် ပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း သတင်းဌာနများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ရှောင်ကျန် အမည်ရှိ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားသည် လမ်းလျှောက်နေစဉ် ၁၂ ထပ်ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခုမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အရှည် ၁၂ စင်တီမီတာရှိ သစ်ပင်ဖြတ်ဓားကို သူမ၏ ကြောင်က တိုက်ချလိုက်သောကြောင့် ဓားသည်မီတာ ၄ဝ အမြင့်မ ပြုတ်ကျလာပြီး ရှောင်၏ ဦးခေါင်းအတွင်းသို့ စိုက်ဝင်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ဓားစိုက်ဝင်နေသည့် ခဏတွင် ရှောင်သည် စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် ပြန်လည်စုစည်းပြီး ဦးခေါင်းတွင် စိုက်ဝင်နေသော အရာကို ကိုယ်တိုင်ဆွဲထုတ်၍ မဖြစ်နိုင် ကြောင်း၊ထို့ကြောင့် အိမ်ပြန်ကာ လူနာတင်ကားခေါ်မည်ဟု ကြံရွယ်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်မီတာ ၁ဝဝ ခန့် လမ်းလျှောက်ပြီးနောက် ခေါင်းမှာနာကျင်လာသည့်အတွက် ထိုင်နေခဲ့ရကြောင်း၊ ထို့နောက်၎င်းကို ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများက နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သောကြောင့် အချိန်မီ အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဧရာမရေငန်မိကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သြစတြေးလျ ငါးဖမ်းလုပ်သား သေဆုံး
ဒါဝင် သြဂုတ် ၁၉
သြစတြေးလျမြောက်ပိုင်း၌ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ငါးဖမ်းနေစဉ် ဧရာမရေငန်မိကျောင်းကြီးတစ်ကောင်၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
အဆိုပါ အမျိုးသားသည် ဒါဝင်တောင်ပိုင်း Ade Laid မြစ်အတွင်း ဆင်းသက်စဉ် ၄ ဒသမ ၅ မီတာ (၁၅ ပေ)ရှိ မိကျောင်းတစ်ကောင်၏တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးသည် အော်သံကြားခဲ့ရပြီး ရေထဲ၌ရိုက်ခတ်နေသော အမြီးကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်း အရာရှိများကို ပြောပြခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး နာရီအနည်းငယ်ကြာမှ အလောင်းကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက မိကျောင်းကို ပစ်သတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယခုနှစ်အတွင်း သြစတြေးလျမြောက်ပိုင်းဒေသ၌ မိကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ယခုသေဆုံးသူသည် လေးဦးရှိပြီဖြစ်သည်။ အပျော်စီးသင်္ဘောများသည် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွား၍ ပိတ်ထားသော ၄င်းမြစ်ကြောင်းနေရာ၌ မိကျောင်းက တိုင်၌ချိတ်ဆွဲထားသော ကြက်သေကောင်ကို လှမ်းဆွဲသည့်ပုံကို ပြသကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယင်းမိကျောင်းသည် အပျော်စီးသင်္ဘောများကို ချဉ်းကပ်လေ့ရှိသည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်က မိကျောင်းကို ကာကွယ်ထားသည့် မျိုးစိတ်အဖြစ် ကြေညာပြီးကတည်းက အရေအတွက်တိုးလာခဲ့သည်။ ၄င်းတို့သည် သြစတြေးလျမြောက်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ၌ တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သြစတြေး လျအစိုးရသည် မတ်လကတင်ပြခဲ့သည့် မြောက်ပိုင်းဒေသကို မိကျောင်းတောပစ်ကွင်းအဖြစ် ခွင့်ပြုရန် အစီအစဉ်ကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
တောက်တဲ့များ၏ တွယ်ကပ်စွမ်းပကား မြင့်မားရခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်
ပေကျင်း ဩဂုတ် ၁၉
မည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆို တောက်တဲ့များအံ့ဩဖွယ် တွယ်ကပ်နေနိုင်ခြင်းမှာ ၎င်းတို့ခြေချောင်းများပေါ်ရှိ အမွေးအမှင်များကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု သုတေသနလေ့လာချက် အသစ်တစ်ရပ်အရသိရသည်။
အသုံးချရူပဗေဒဂျာနယ်၌ ဖော်ပြသည့် သုတေသန အစီရင်ခံချက် တွင် တောက်တဲ့ များသည် ဆဲတာဟုခေါ်သည့် ၎င်းတို့၏ ခြေချောင်း များပေါ်ရှိ သေးငယ်ပါးလွှာသည့် အမွေးအမှင်များကို အသုံးပြုပြီး မတ်စောက်သော နံရံများပေါ် တွယ်တက်လျက် ရံဖန်ရံခါ မျက်နှာကြက်ပေါ်တွင် ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်အနေအထားဖြင့်ပင် မည်ကဲ့သို့ တွယ်ကပ်နေနိုင်သည်ဟူသော အချက်ကို ရှင်းပြထားသည်။
တောက်တဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ အံ့ဖွယ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု၊ မှီတွယ်နိုင်မှုနှင့် ခြေချောင်း အမွေးအမှင် များဆန့်နိုင်မှုတို့ကြောင့် မည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆိုတွယ်ကပ်နေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုတေသနစာတမ်း ဦးဆောင်ပြုစုသူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အိုရီဂွန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ပါမောက္ခ အလက်စ်ဂရီးနီး က ပြောကြားသည်။
ဖော်ပြပါအချက်များကြောင့် တောက်တဲ့များသည်၎င်းတို့၏ ခြေဖဝါးများကို လျင်မြန်စွာ ကပ်၊ ခွာပြုလုပ်နိုင် သဖြင့် မျက်နှာပြင်များတစ်လျှောက် တစ်စက္ကန့် လျှင်ခန္ဓာကိုယ်အရှည်၏ အဆနှစ်ဆယ်အထိ လျှပ်တစ်ပြက် ပြေးလွှား နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
တောက်တဲ့များ၏ ခြေချောင်းများအပေါ် သုတေသန စုံစုံလင်လင်ပြုလုပ် ထားကြောင်း၊ ရှေးဟောင်းဂရိခေတ် ကတည်းက လူများသည် တောက်တဲ့များ နံရံများပေါ်တွင်မည်ကဲ့သို့တွယ်တက်နိုင်သည်ကို အံ့ဩလာကြ ကြောင်းအလက်စ်ဂရီးနီးက ပြောကြားသည်။
တောက်တဲ့များသည် ခြေချောင်းအမွေးအမှင်များ၏မော်လီကျူးများမှလာသည့် အီလက်ထရွန်များနှင့် နံရံမော် လီကျူးများမှ လာသည့် အီလက်ထရွန်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန်ဓာတ်ပြုရာမှ ဖြစ်လာသော ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နှောင်ဖွဲ့မှုဖြစ်သည့် van der Waals ကို အသုံးပြုပြီး တွယ်ကပ်မှုပြုလျက် အီလက်ထရွန် မဂ္ဂနက်တစ် ဆွဲငင်အားတစ်ခု ဖန်တီးကာ မည်သည့် မျက်နှာပြင်တွင်မဆို တွယ်ကပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန် စက်ရုပ်ပညာရှင် ကဲလာအော်တွမ်နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် တညီ တညွတ်တည်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
1. Dear Sayar, I would like to ask about Alum. Can I use attached instruction? How long do I need to use if I can use it?
2. ဆရာရှင့် ရိုင်းသွားခဲ့ရင် နားနဲ့မနာဖ၀ါးနဲ့နာပေးပါရှင့်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ မှိုတက်တဲ့ရောဂါ ဗဂျိုင်းနားမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါရှင့်။ အဖြူဖတ်တွေဆင်းတယ် အနံ့တော့မရှိဘူး။ အနည်းငယ် ယားယံတယ်။ ဒိန်ချဉ် သောက်ရင်ပျောက်တယ်လို့တော့ကြားဖုးပါတယ်။ နောက် ဘာဆေးသောက်ရင် ပျောက်နိုင်ပါသလဲရှင့်။ မိုးတွင်းမှာ အတွင်းခံတွေ မခြောက်တခြောက်တွေဝတ်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ထရိန်က ထွက်လာရင်လဲ အတွင်းခံမှာ ရေတွေ စိုသွားပါတယ်။ တနေကုန် အတွင်းခံကစိုနေလို့ အဲလိုဖြစ်တာများလားရှင့်။ ဘယ်လို ကုသမှုခံယူရပါမလဲရှင်။ ကလိုထရီဒန် ဆိုသော ထည့်ဆေး သုံးပြီး ၄ ရက်လောက်သုံးပြီးနောက် မယားတော့ပေမဲ့ အဖြူဖတ်တွေ အရမ်းဆင်းပါတယ်ရှင့်။ ပထမ ၆ရက်သုံးပြီးနောက် အဖြူဖတ်တွေဆင်းတာ မသက်သာသေးလို့ နောက် တစ်ကဒ်သုံးတာ ၅ ရက်မြောက်ရှိပါပြီ။ စုစုပေါင်း ၁၁ ရက်မှာ လုံးဝမသက်သာပါဘူး။ မယားပေမဲ့ အဖြူဖတ်တွေ အထွေးလိုက်ဆင်းတာပါ။ အနံမရှိပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲရှင့်။ ဆေးကိုတော့ လက်သေချာဆေးပြီး လက်ဆုံးတဲ့အထိထည့်တာပါပဲရှင့်။ ဒါကြောင့် သောက်ဆေးရှိပါသလားရှင်။ သောက်ဆေး ညွှန်းပေးစေလိုပါသည်။ ဆရာနဲ့လူနာကြားက ပွင့်လင်းမှုလို့မြင်ပေးပါရှင်။ ကျမ အပျိုပါဆရာ။
ပဌမမေးခွန်းအတွက် ဆရာရေးထားတဲ့စာထဲမှာ ပါရင်တော့သုံးနိုင်ပါတယ်လို့ဖြေပါရစေ။ ကျန်မာရေးမှာ ‘ပွင့်လင်းမှု’ လိုတယ်။ ‘ရိုးသားမှု’ လိုတယ်။ ‘စည်းစောင့်ဘို့’ လဲလိုပါတယ်။ အခုမေးခွန်းက မေးနည်းကောင်းတယ်။ အသက်တော့ မသိရပါ။ ‘အပျို’ ဆိုတာမှာလဲ ဆရာဝန်က မေးချင်တာရှိတတ်သေးတယ်။
ဆက်တွဲဖတ်နိုင်တာတွေလဲရေးထားပါတယ်။ အများအတွက်မသင့်လို့ မေးတဲ့သူတွေဆီကိုသာ တိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါမယ်။
1. Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း
2. Vaginal infections မွေးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း
3. Vaginal itching မိန်းမကိုယ် ယားခြင်း
4. Vaginal odor (ဗဂျိုင်းနား) အနံ့ဆိုးနေခြင်း